१८ वर्षमै स्थायी बन्ध्याकरण
काठमाडौं, फागुन ११ । कानुनले विवाहका लागि न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ। तर, डोटीकी एक किशोरीले १८ वषमै दुई सन्तान जन्माएर स्थायी बन्ध्याकरण पनि गरेकी छिन्।बोगटान गाउँपालिका- १ सिमचौरकी मनीषा बोहराले ६ फागुनमा बन्ध्याकरण गराएकी हुन्। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
जिल्ला अस्पतालले उनकै गाउँमा शिविर चलाएको थियो। १३ वर्षमै उनको विवाह भएको थियो। १४ वर्षमा पहिलो र १७ वर्षमा दोस्रो सन्तान भएको उनले बताइन्। ‘सानो उमेरमै दुई सन्तान भइसके, त्योभन्दा बढाउन डर लाग्यो, त्यसैले अप्रेसन गराएँ,’ उनले भनिन्। सानै उमेरमा बिहे गर्नुहुँदैन भन्ने थाहा नभएको उनले बताइन्।
आमा बनेपछि मात्रै छिटो बिहे गरेको महसुस भएको उनले सुनाइन् । ‘सानैमा विवाह गरेर एउटा गल्ती त भइहाल्यो,’ मनीषाले भनिन्, ‘धेरै बच्चा जन्माएर अर्को गल्ती नहोस् भनेर समयमै बन्ध्याकरण गरेकी हुँ ।’ सानै उमेरमा बन्ध्याकरणका लागि आएको देख्दा जिल्ल परेको जिल्ला अस्पताल डोटीका डा. गिरिश अवस्थीले बताए। ‘सुरुमा त आफन्तको बन्ध्याकरणका लागि साथमा आउनुभएको होला जस्तो लागेको थियो,’ डा. अवस्थीले भने, ‘उहाँले आफ्नै बन्ध्याकरण गराउन आएको बताएपछि अचम्म लाग्यो।’